OSI inomira kushanda neFSF kana Richard Stallman akasasiya basa zvakare | Linux Vakapindwa muropa
OSI inomira kushanda neFSF kana Richard Stallman akasasiya basa zvakare
Pakati pemazuva ekupedzisira nharaunda zvine chekuita ne open sosi uye zvakare zvine hukama neFree Software Foundation (FSF) Ivo vanga vari munyonganiso nekuda kwe kune chiziviso chazvino chekudzoka kwake kubva kuna Richard Stallman (ruzivo runogona kuwanikwa mune positi ya diego Mune inotevera chinongedzo).
Uye ndizvo izvozvo Richard M. Stallman akashamisa vazhinji nekuzivisa kuti ari kudzoka kubhodhi revatungamiriri reFree Software Foundation uko kana iyo FSF ikubvumidza iwe kuti udzokere kubhodhi rayo revatungamiriri, kudzoka kwake hakufadze munhu wese vatambi vakuru mune yakavhurwa sosi uye yemahara software, kunyanya kuOSI (Open Source Initiative).
Kubva kwekupedzisira yakazivisa kuti ichamisa kubatana kwese neFSF kwenguva iripo chero bedzi Stallman ari chikamu chehutungamiriri hwesangano.
Mukuzivisa kwayo kwandakaita, OSI inogovera zvinotevera:
Kuti usunungure zvizere pane chivimbiso cheyakavhurwa sosi, iyo Open Source Initiative (OSI) yakazvipira kuvaka nharaunda inosanganisa umo nharaunda dzakasiyana dzevabatsiri dzinonzwa kugamuchirwa. Zviripachena, izvi hazvigoneke kana isu tikasanganisira avo vakaratidza maitiro ehunhu zvisingaenderane nezvinangwa izvi.
Uye ndezvekuti OSI haina kuzeza kutaura pachena "kutsamwa" kwayo yenyaya iyi, sezvo chinzvimbo chayo chiri pachena: sangano rinoramba kubvumidza Stallman kutora chinzvimbo chehutungamiriri mune chero chinhu chine chekuita neakavhurika sosi uye yemahara software uye haichazoshandirane neFSF kana izvi zvikasateedzerwa zviviri zvinodiwa.
"Kuti uzadzise zvizere chivimbiso cheyakavhurika sosi, OSI yakazvipira kugadzira nzvimbo inosanganisa iyo nzvimbo dzakasiyana dzevabatsiri dzinonzwa kugamuchirwa. Izvi zviri pachena kuti hazviite kana tikasanganisira avo vakaratidza maitiro ehunhu asingaenderane nezvinangwa izvi, ”akadaro.
Richard Stallman achangobva kuzivisa kuti achadzokera kuFSF Board of Directors, chirevo icho FSF isina kuramba. Isu tinotenda kuti hazvina kukodzera kuti Stallman atore chinzvimbo chehutungamiriri mune yemahara uye yakavhurika sosi software nharaunda. Kana isu tisingataure tichipesana neizvi, kunyarara kwedu kunogona kusanzwisisika sekutsigira. Open Source Initiative inodaidzira kuti Free Software Foundation ibate Stallman achizvidavirira pamaitiro ake ekare, vamubvise pahutungamiriri hwesangano, uye voedza kugadzirisa kukanganisa kwaakakonzera kune vese vaakasiya, "OSI inodaira.
Zvinoenderana neOSI, izvi zvinosanganisira:
"Avo avo Stallman anozviona seasina kukodzera uye neavo vaakakuvadza namashoko nezviito zvake."
“Hatichapinda chero zviitiko zvinopinda Richard Stallman uye hatizokwanise kubatana neFSF kudzamara Stallman abviswa pahutungamiriri hwesangano. Mahara uye akavhurika sosi software haingawanikwe nemunhu wese kusvika zvakachengeteka kuti munhu wese atore chikamu, uye nekudaro tinosheedza vezera redu munharaunda yakakura yesoftware kuti vabatane nesu mukuita izvi zvisungo. "Yakanyora OSI mune chinyorwa pawebhusaiti yadzo.
Zvisinei nemhinduro, chokwadi chiri nyore chekuti aita chiziviso chemhando yepamusoro chinoratidza mimwe mibvunzo uye pamusoro pazvo zvese Stallman ari pamucheto wedombo fungidziro mbiri, imwe kwaanorega zvese nekudzoka kwake zvishoma nezvishoma uye kunyanya kwaanoisa njodzi yekukuvadza iyo hukama pakati pemasangano akasiyana siyana mune yakavhurika sosi uye yemahara software nharaunda.
Ipo kune rimwe divi, kana kudzoka kwake kubhodhi reFSF kuchirambidzwa, anga achiri kungoisa muenzaniso uye shanduko dzakawanda dzakabatana mumitemo yeFSF uye munzvimbo dzakasiyana dzakasununguka.
Chekupedzisira, Stallman ave kuzivikanwa ave kutora chimiro chakasimba: haazoregi zvakare. Saka zvinhu zvichave zvakaita sei mune ramangwana pakati peOSI neFSF?
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve chinzvimbo chakatorwa neOSI, unogona kutarisa ruzivo nekuenda kunotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OSI inomira kushanda neFSF kana Richard Stallman akasasiya basa zvakare
Emre ONGUN akadaro
Hapana yemahara software nharaunda yakapa yakawanda kusunungura software saStalman. Sarudzo yeOSI inokuvadza kune Yemahara Software Nharaunda.
Pindura Emre ONGUN
va pachena akadaro
Zvingave here kuti iyo OSI inoona kabanzu muziso reumwe uye kwete danda mukati maro?
Pindura kuna Frank
Bartolome Gomez Marquez akadaro
Zviri pachena, zvakanaka, iyo OSI isangano re "vakagumbuka" mune zvematongerwo enyika, maitiro anozivisa vazhinji vanovaudza.
Pindura Bartolomé Gómez Márquez
Kwete zvese zviri sezvauri kuronga ... zviuru zvinokumbira Stallman kuti adzose kuraira uye aende
Debian 10.9 inouya neSBAT ​​rutsigiro rweFWUPD mapakeji uye chengetedzo uye kugadzirisa mashandiro